Malaysia « MMWeather Information BLOG
By mmweather.ygn, on June 26th, 2013%
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ စုမာတြားကျွန်း၊ အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် လောင်ကျွမ်းလျှက်ရှိသည့် တောမီး(Peat Fire – သစ်ဆွေးမြေတောမီး) သည် ဇွန်လ ၂၆ ရက် နံနက်တွင် ရရှိသည့် NASA – FIRMS Web Fire Mapper ပုံ အရ သိသာစွာ နည်းပါးသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ (ပုံ – ၁) Air Pollution: Real-time Air Quality Index တွင် မလေးရှားနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံတို့တွင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်သည့် မီးခိုးဖုံးလွှမ်းမှု အခြေအနေရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်း အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ရသည့် အနေအထားမဟုတ်တော့ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ (ပုံ – ၂)
ပုံ – ၁ ပုံ – . . . → Read More: အင်ဒို-တောမီး အခြေအနေ-သိသိသာသာကောင်းမွန်လာ
Leaveacomment Uncategorized အင်ဒိုနီးရှားတောမီးလောင်ကျွမ်းမှု လျော့နည်းသွားနိုင်
By mmweather.ygn, on June 25th, 2013%
လွန်ခဲ့သည် ၄၈ နာရီအတွင်းက တောမီး ဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေဆဲ/လောင်ကျွမ်းပြီး နေရာများ .. (Last . . . → Read More: အင်ဒိုနီးရှားတောမီးလောင်ကျွမ်းမှု လျော့နည်းသွားနိုင်
Leaveacomment Uncategorized အင်ဒိုနီးရှားတောမီးလောင်သည့် အခြေအနေနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှု အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on June 24th, 2013%
ဇွန်လ ၂၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၁၇းဝဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် လေထုညစ်ညမ်းမှု အခြေအနေနှင့် အင်ဒိုနီးရှားတွင် လောင်ကျွမ်းဆဲ တောမီး အခြေအနေများဖြစ်ပါသည်။
တောမီး ဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေဆဲ နေရာများ .. (Last Observation 23JUN1530-Local time) ကွာလာလမ်ပူ(မလေးရှား)နှင့် စင်္ကာပူ တို့ အပေါ်မှ မီးခိုးအန္တရာယ် (Air Pollution အညွှန်းကိန်းပြ မြေပုံ) – အောက်ပုံ . . . → Read More: အင်ဒိုနီးရှားတောမီးလောင်သည့် အခြေအနေနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှု အခြေအနေ